Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ary ny mandresy dia Boeing! Ny mpanamboatra fiaramanidina amerikana dia mamoaka ny Airbus ao amin'ny Paris Airshow
Niaiky ilay mpanamboatra fiaramanidina eropeana Airbus fa tsy ampy ny baiko nomeny an'i Boeing mpifaninana amerikana tamin'ny fivarotana fiaramanidina 326 nifanarahana tao amin'ny Paris Airshow tamin'ny alakamisy.
Raha ny filazan'ny lohan'ny varotra John Leahy, ny fiaramanidina nasaina dia ambany $ 40 miliara.
Nanao sonia ny fifampiraharahana tamin'ny AirAsia ny Airbus, ary ireo mpitatitra fiaramanidina tsy miankina Zagros Airlines sy Iran Airtour.
“Seho miadana kokoa noho ny tamin'ny taona lasa ve ity? Eny. Manaiky ve isika fa nivarotra fiaramanidina vitsivitsy maromaro noho i Boeing? Eny, ”hoy i Leahy tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety.
Ny lehiben'ny varotra fiaramanidina Boeing, Ihssane Mounir, dia nilaza fa nahazo baiko sy fanoloran-tena ho an'ny fiaramanidina 571 mitentina $ 74.8 miliara ny orinasa.
“Tena nampientanentana anay,” hoy i Mounir araka ny nitanisa an'i Bloomberg. “Nandeha tany amin'ny ankamaroan'ireny aho, ary ity angamba no iray amin'ireo fandaharam-potoananay indrindra”.
Ny fampanantenna hividy ny zoro vaovao 737 Max 10, izay nanomboka ny varotra Boeing tany Paris hifaninana amin'ny A321neo an'ny Airbus, dia nahatratra 361 ny zotram-piaramanidina, hoy izy.
"Nanantena izahay fa hanana famoahana lehibe kokoa amin'ny 737 Max 10 izy ireo, tsy dia ny fiovam-po firy, ny baiko fanampiny," hoy i Airbus 'Leahy, ary nanampy ny fanombohana ny fiaramanidina Boeing mety hiteraka tsindry vidiny. “Mazava ho avy fa hanenjika antsika izy ireo.”
Ny mpividy lehibe indrindra nambara tao amin'ny Paris Expo, GE Capital Aviation Services, dia nandidy fiaramanidina 100 Airbus mitentina $ 10.8 miliara ary nanova 20 ny isan'ny famokarana Boeing tamin'ny fividianana teo aloha ho Max 10.
Nanambara i Boeing fa nanao sonia fifanarahana fivarotana tamin'ny “kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsy fantatra” ho an'ny 125 737 Max 8s mitentina $ 14 miliara.
Nahazo modely Boeing mitentina 8.4 miliara $ ho an'ny modely Boeing, ilay manana ny laharana fahatelo lehibe indrindra eto Avolon. Ny tale jeneraliny Domhnal Slattery dia nilaza tamin'i Bloomberg fa ny vondron'ny Bohai Capital Holding monina ao Beijing dia nanapa-kevitra ny hidina amin'ny serivisy hatramin'ny 125 amin'ireo fiaramanidina tery tery farany nohavaozina nanomboka tamin'ny 2021 satria “trano tena sarobidy” ireo slots.
Nilaza izy fa ny andian-tsarimihetsika Max dia mihoatra ny taona 2020, ary ny fahaiza-manao dia voafetra ho an'ilay maodely tian'ireo mpitatitra tetibola. Ny vinavinan'ny slattery dia miova ho any Azia ny tsenan'habakabaka noho ny ambaratonga antonony nanitatra olona mihoatra ny 1 miliara tao anatin'ny folo taona ho avy.